DOWNLOAD Zeppelin NT V1.0 for FS2004
Ny Zeppelin NT (New Technology Zeppelin) dia karazana fiaramanidina natsangan'ny orinasa Alemana Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, Friedrichshafen, ao amin'ny 1990.
izany add-on dia natsangan'ny FSDS3.5. Ny endri-javatra dia modely marika LOD misy sary mihetsika FSX. Fitaovana virtoaly virtoaly, jiro ary fiantraikany tanteraka. Repaintset iray sy repay efatra no tafiditra ao. Aza hadino fa tsy ampiharina ny endri-javatra DirectX10.
Tsara toetra sy tsara daholo
Downloads 34 624
Thomas Roehl, Joerg Hammes sy Stefan Medelnik